राजा सलहेसको कथामा आधारित ‘सलहेसः द पिपुल्स हिरो’ फिल्म बन्ने
जनकपुरधाम , साउन ३२ गते ।
१५ सय वर्षअघिको ऐतिहासिक कथामाथि फिल्म बन्ने भएको छ । मिथिलाका राजा सलहेसको गाथामाथि ‘सलहेसः द पिपुल्स हिरो’ नामक आवधिक फिल्म निर्माण हुने भएको हो । राजधानीमा सोमबार एक कार्यक्रमका विच निर्माण युनिटले फिल्मका विषयमा जानकारी गराएको हो ।
भोर कम्पनी प्रा.लिको प्रस्तुतिमा बन्ने यो फिल्मका प्रमुख पात्र सलहेस मिथिलामा राजा जनकपछिको प्रादुर भाव भएको व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई तराईंको दुसाध समुदायले अहिले पनि भगवानका रुपमा पुजा गर्ने गर्छ । लामो समयको रिसर्च पछि हामी फिल्म बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ फिल्मका निर्माता समेत रहेका रिसर्चर राज कुमार महतोले बताए ।
फिल्मलाई अमितेश साहले निर्देशन गर्ने भएका छन । उनको यो पहिलो फिचर फिल्म हुनेछ । भारतको दिल्लीस्थित एशियन एकेडेमी अफ फिल्म एण्ड टेलिभिजनबाट फिल्म मेकिङ पढेका अमितेश सन् २००० देखि अडियो–भिज्युअल मिडियामा कार्यरत छन् । ६० भन्दा बढी नाटकको निर्देशन गरिसकेका अमितेशले सर्ट फिल्म ‘कमला’ बनाएका छन् । यो फिल्मले अन्तराष्ट्रिय फिल्म महोत्सवहरुमा अवार्ड समेत जितेको छ ।
करिब तीन करोड अनुमानित बजेट राखिएको यो फिल्मको छायांकन धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरड., झापा, चितवन र भारतका स्थानहरु हुने निर्माता महतोले जानकारी दिए । ‘हामी करिब ६ महिना प्रि–प्रडक्सनमा व्यस्त हुनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र फिल्मको सुटिङ थाल्नेछौं । एकवर्षभित्रमा फिल्म रिलिज गरिसक्ने योजना छ ।’ यो फिल्मलाई अन्तराष्ट्रिय फिल्म महोत्सवहरुमा सहभागी गराउने उद्धेश्य रहेको निर्देशक शाहले बताए ।
मिथिलाको हावापानी, खेत–खलो, गाउँघर, पशु–पंक्षी, वन–जंगल सर्वत्र लोकप्रिय पात्र हुन्, राजा सहलेस । राजर्षी राजा जनक पछि मिथिलामा उनलाई प्रादुर भाव भएको व्यक्तित्व मानिन्छ । पांचौ–छैठौ शताब्दीतिर मिथिलामा आफ्नो पराक्रम र चमत्कारीक नेतृत्वले गर्दा आजसम्म उनको चर्चा छ । उनको वास्तविक नाम भने राजा जयवर्धन सैलेश रहेको थियो । यिनी कुनै दन्त्य कथाका पात्र होइनन्, न त पुराणका यशस्वी राजर्षि नै हुन् । उनी त्यतिबेला राजा भएता पनि लोक कल्याणमा सक्रिय थिए जसकारण उनी जनताका प्रिय पात्र बनेको बताइन्छ । त्यसैले आज आममानिस नै यिनको अमरत्वको रक्षक बनेका छन् । उनको व्यक्तित्वमा अचम्मको आकर्षण छ । प्रेम, प्रकृति, शौर्य, न्याय र नेतृत्व सबै गुणमा उनी सबल मानिन्थे । सलहेसमात्र नभएर उनका सहयोगी पात्रहरू पनि देउताझैँ पूजन्छिन । पूर्वी नेपाल र उत्तरी बिहार अर्थात मिथिला क्षेत्र सलहेसको कर्मथलो रह्यो । मिथिलामा अन्याय, अत्याचार र अराजकता बढेको समयमा सलहेसको प्रादुर्भाव भएको थियो । उनलाई मिथिला क्षेत्रमा अन्याय र अत्याचार विरुद्ध लडेका विद्रोही पात्रका रुपमा समेत चिनिन्छ ।
सिरहाको लहानदेखि चार किलोमिटर पश्चिममा उनको नाममा राखिएको सलहेश फुलबारी छ । हरेक वर्षको नयाँ वर्षमा उक्त फुलबारीमा फुल फुल्ने गर्छ । फुलबारीमा पुजा गर्न आउने मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वास गरिन्छ । यो फुलबारीमा राजा सलहेस फुल टिप्ने जान्थे भन्ने किवंदन्ती छ । सलहेसलाई उनकी प्रेमीका कुशमा मालिनले हरेक दिन त्यहाँ फुलको माला अर्पण गर्थिन भन्ने विश्वास छ । त्यही प्रेमको प्रतिकका रुपमा आज पनि त्यहाँ फुल फुल्ने गरेको विश्वास गरिन्छ । वैशाख १ गते त्यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्छ जहाँ नेपाल र भारतबाट लाखौं मानिस आउने गर्छन ।
फिल्मको कलाकारका बारेमा ः यो ऐतिहासिक फिल्म भएकाले यसमा अभिनय गर्ने चरित्रहरु पनि ति पात्रहरुसँग मिल्नुपर्छ । त्यसैले फिल्ममा रहने प्रत्येक पात्रहरुको स्केचिङ पश्चात त्यस अनुसारको कलाकारहरु अडिसनमार्फत छनौट गर्ने तयारीमा निर्माण युनिट छ । कलाकारहरुको छनौट नेपाल र भारतका विभिन्न प्रमुख स्थानहरुमा अडिसन मार्फत गरिनेछ ।
फिल्ममा रहने पात्रहरु
१. सलहेस ः राजा सलहेस, प्रमुख पात्र (दुसाधमा जन्मेका लोक नायक)
२. रेशमा, कुसमा र दौना ः मोरङका मालिनहरू (तीनै बहिनीका मनमा एउटै छवि थियो, एउटै कल्पना थियो, एउटा सुन्दर–बुद्धिमान र बलवान पुरुषको । ती पुरुष थिए— सलहेस ।)
३. चूहड़मल ः मिथिलाको खुंखार दुष्य
४. चन्द्रावती ः पकडीया गढका राजकुमारी जसले पनि सलहेसलाई अथाह प्रेम गर्थिन ।
५. करिकन्हाः सलहेसको भान्जा ( हस्तीयुद्ध कला अर्थात् हात्तीमा चढेर गरिने युद्धमा अत्यन्त निपुण थिए)
६. मोतीराम ः सलहेसका भाइ (पहलवानी खेलका खेलाडी पहलवानहरूलाई सुसंगठित गर्ने जिम्मेवारी लिएका थिए)
७. बुधेसर ः सलहेसका अर्का भाइ (राज्य सञ्चालनका लागि बौद्धिक कार्य गर्दथे)
८. सुगाहिरामनः कुशाग्र बुद्धिका मन्त्री जो गुप्तचर परिचालनमा अत्यन्त दक्ष थिए
९. अन्हेरबाँट ः एउटा विशिष्ट सैन्य दलको सञ्चालनको जिम्मा लिएका थिए (सलहेसका मित्र)
१०. केबला किराँंतः सलहेसको सैन्य दलमा किराँती सेना थियो, जसको उ सेनापति थिए ।
मैले मिथिला र नेपालको गौरवमा ईंटा थपिने खालको चलचित्र निमार्णमा निर्देशकको भुमिका निर्वाह गर्न पाउदा वास्तवमै उर्जाशिल महसुस गरेको छु । यस खोजपूर्ण ऐतिहासिक–सांस्कृतिक विषयमा काम गर्दा कुनै पक्षमा कमी रहन नदिन हर सम्भव प्रयास गर्नेछु । फिल्मको कास्टिंड., कसट्यूम, गहना, श्रृंगार, सेट, लोकेसन, संगित हरेक पक्षमा विस्तृतमा काम गर्नु र कथालाई न्याय गर्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण रहेको छ । जसले मलाई काम गर्न झन उत्साह बढाई रहेको छ । आशा छ, यस चलचित्रबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रले थप स्तरीयता महसुस गर्नेछ ।
मैले राजा सलहेस र यसका वरिपरिका कथामाथि अनुसन्धान गरे । अनुसन्धान गरेपछिको मेरो निष्कर्ष हो– यस्तो कथामाथि फिल्म बन्नुपर्छ । विश्वले नेपालमा राजा सलहेस जस्ता महान व्यक्तित्व पनि थिए है भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ । त्यसैले म आफैंले यो फिल्मको निर्माण गर्न अघि बढेको हुँ । म कुनै व्यवसायिक निर्माता होइन । मलाई राजा सलहेस र यसको गाथाले छोएको हो । र, फिल्मका लागि लगानी गर्ने निधो गरेको हुँ ।
फिल्म निर्माण टिम ः
ब्यानर ः भोर कम्पनी प्रा.लि.
निर्देशक ः अमितेश शाह
कथा ः डा. राजेन्द्र विमल
अनुसन्धान ः राजकुमार महतो
संवादः महेन्द्र मलगिंया
पटकथा ः अमितेश शाह
संगित ः सुनिल – प्रवेश
गीतः डा. राजेन्द्र विमल, अशोक दत्त, इश्वर दाहाल
छायांकन ः पुरुषोत्तम प्रधान
भिएफएक्स सुपरभाइजर र स्टोरी बोर्ड ः अनुपम शाह
मिडिया संयोजक ः अनिल यादव